I-Sergi - Jockstrap - I-Gay Underwear - iGay Shop
Izambatho zangaphansi kanye nomdwebo wesayizi womswakama
Ishadi lomthamo wesilinganiso
I-Sergi - Jockstrap - I-Gay Underwear
Wonga imali € 6,00 (31 %)
I-Orange / S - € 12,99 EUR I-Orange / M - € 12,99 EUR I-Orange / L - € 12,99 EUR I-Sky Blue / S - € 12,99 EUR I-Sky Blue / M - € 12,99 EUR I-Sky Blue / L - € 12,99 EUR I-Navy Blue / S - € 12,99 EUR I-Navy Blue / M - € 12,99 EUR I-Navy Blue / L - € 12,99 EUR Grey / S - € 12,99 EUR Grey / M - € 12,99 EUR Grey / L - € 12,99 EUR I-White / S - € 12,99 EUR I-White / M - € 12,99 EUR I-White / L - € 12,99 EUR Okumnyama / S - € 12,99 EUR Okumnyama / M - € 12,99 EUR Okumnyama / L - € 12,99 EUR
I-100% SECURE yokukhokha SSL
Imikhiqizo yethu ngokuvamile thumela ngaphakathi kwe-1-5 izinsuku zebhizinisi (izinsuku zebhizinisi azibandakanyi iviki noma amaholidi).
Uma ngabe i-oda lakho liqukethe izinto ezithandwayo ezibhekene nezinkinga zokutholakala kwesitoreji, umyalo ungathatha phakathi kwezinsuku zebhizinisi ezingu-5 - 10 ukucubungula.
Sicela uqaphele ukuthumela isikhathi sithinteka ngamasiko, izinto zokusebenza, amaholidi kanye nezikhathi.
Isikhathi sokuthumela (Ukulinganiselwa kwezinsuku zebhizinisi)
Shipping Free I-united states 8 - 35
I-Canada * 12 - 35
Isikhathi sokuthumela ngezansi sihluka kakhulu ngokususelwa kwimikhiqizo oyilandelayo, i-90% yesikhathi esizothatha isikhathi esifushane kunesikhathi esiphezulu esibalwe ngenhla.
* Sicela uqaphele ukuthi ngenxa yesikhathi esithile sokubamba esenziwa yiSikhungo Sezinkonzo ZaseCanada, amaphakheji ajwayelekile emazweni angase athathe izinyanga ezingu-3 eza eCanada ezigcinweni zethu zase-Asia.
Sinikeza Ukuthumela kwamahhala Emhlabeni jikelele yonke into, akukho ukuthenga okungenani okudingekayo.
Yonke imiyalo ihambisana namasiko kanye nemali yemisebenzi njengoba kuchazwa izwe lokungeniswa. Imali kanye nemali yokusebenza ayihlanganisiwe ku-oda lakho kanye / noma inani lokuthumela.
I-Egay Shop ayinabo obhekene nezindleko ezihlobene nokungenisa. Zonke izimali kumele zikhokhwe ngumamukeli wephasela.
Izinto zakho zingase zifike kumaphakheji amaningi, ngaphandle kwezindleko ezengeziwe.
Sicela uqinisekise ukuthi ikheli oyifakile lilungile.
Uma i-oda lakho lithumele, uzothola isiqiniseko sokuthumela nge-imeyili ngenombolo yokulandelela.
Uma unganelisekile ngokuphelele ngokuthenga kwakho, ungabuyela umkhiqizo kithi ezinsukwini ezingu-30 ukuze uthole imali egcwele yomkhiqizo.
Izindleko zokuthumela azibuyiswa futhi uzoba necala lokukhokha izindleko zakho zokuthumela ngokubuyisela into yakho. Uma uthola ukubuyiselwa kwemali, izindleko zokuthumela imbuyiselo zizoncishiswa ekubuyiselweni kwemali yakho.
I-Adebayor - Iziqu - Amaswidi WamaGay € 34,99 € 24,99
Amir - Mfushane - Ngaphansi kwezingubo ze-Gay € 21,99 € 15,99
I-Army - Jockstrap - I-Gay Underwear € 21,99 € 15,99
I-Arthur - Jockstrap - Ingubo Yokugqoka Gay € 22,99 € 16,99